Oke osisi okike: njirimara, mmegharị na ihu igwe | Network Meteorology
Mgbe anyị dị obere, a kụziiri anyị n’ụlọ akwụkwọ na e nwere ụdị osisi abụọ dị mkpa. N'otu aka, anyị nwere osisi ndị ahụ na-ejigide akwụkwọ ha n'oge oge oyi ma, n'aka nke ọzọ, osisi ndị ọzọ na-efunahụ ha. A na-akpọ ndị nke mbụ evergreens na ndị nke ikpeazụ bụ osisi deciduous. Osisi ndị na-echekwa ahịhịa ndụ nke akwụkwọ ha n'agbanyeghị mgbanwe oge a na oge nke ahịhịa ndụ na-ezu ike ma na-etolite nnukwu uka evergreen ọhịa. Evergreen pụtara akwụkwọ osisi ma ọ bụ osisi na-adịgide adịgide. Fọdụ ụdị dị iche iche nke aha a na-adịgide adịgide ma ọ bụ na-adịgide adịgide.
N’isiokwu a, anyị ga-agwa gị njirimara niile, ọdịdị na usoro ọmụmụ nke ọhịa na-adịghị agbanwe agbanwe.
2 Osisi Evergreen nwere akpịrịkpa na agịga
3 Oke ohia na imeghari
Enwere mpaghara nwere oyi oyi na-eme ka osisi ghara ịhapụ akwụkwọ ha. Otú ọ dị, evergreens anaghị awụpụ akwụkwọ ha ma ọ bụ na-emetụta ọdịiche ihu igwe. Osisi ndị a na-awụ obere pere mpe nke akwụkwọ ha iji nwee ike iji nwayọọ nwayọọ megharia ha. Ha na-eme ya kwa abụọ ma ọ bụ otu afọ, ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe nile ka iko ha na-ekpuchi ma na-egosipụta akwụkwọ. Epupụta ịnọgide na-enwe ha ufiop akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na agba nile nke okirikiri.
Oke ohia ndu ohia bu ngalaba nke no na ya osisi na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ nwere akwụkwọ buru ibu. A na-ahụkarị ha n’ókèala equatorial na n’ala ndị dị n’ebe okpomọkụ nke ihe ha ji amata bụ mmiri ozuzo na-abịakarị. Nke a pụtara na enwere ụdị dị ka magnolia ma ọ bụ ficus nwere ike ịchọta na mpaghara nwere gburugburu ọkụ. Nnukwu akwụkwọ osisi ahụ na-enye aka na iche iche nke ugwu nke ahịhịa.
Osisi ndị a nwere okpueze buru ibu nwere ike ịmịkọrọ ụzarị anyanwụ, na-egbochi ha irute ahịhịa dị ala. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, njupụta nke epupụta nke osisi ndị a na-emetụta ahịhịa dị n'okpuru. Nke a pụtara na osisi ole na ole nwere ike ịlanarị n'okpuru ndò nke osisi ndị a na-emepụta. Na, ọ bụrụ na ha anataghị ìhè anyanwụ, ha enweghị ike iji foto seezigheesi nke ọma.
E nwere ụdị dị ka epiphytes ndị kwụgidere na osisi ma ọ bụ alaka na osisi vaịn ndị na-adịkarị na osisi osisi. A na-etinye ụdị ndị a n'ụzọ dị otú a na ha nwere ike ịnweta ụzarị anyanwụ. N'ime ohia na-acha ahịhịa ndụ na-adịkarịghị enwe ike ịhụ osisi ụfọdụ na ihu igwe dị ọkụ mana enwere ụfọdụ dị ka oroma, willow, laurel, carob, olive na eucalyptus.
Ebe enwere oke okpomoku nke ala osisi birch na-achi. Birch ndị a bụ nke Fagales na Ha nwekwara osisi ndị ọzọ dịka oak, beech na alder.
Osisi Evergreen nwere akpịrịkpa na agịga
E nwere ụdị ọhịa ọzọ na-anaghị ahịhịa ndụ nke nwere osisi n’ime ya nke nwere ụdị ihe dị iche iche nke na -eche akpịrịkpa ma ọ bụ agịga. Ibé akwụkwọ ndị a nwere nkwesi ike na-emetụ aka ma kpuchie ya na resin. Speciesdị oke ọhịa ndị a bụ cypress, pine, cedar, yew na sequoia. Osisi ndị a dịkwa n'etiti conifers nke bụ osisi na-eto eto na mpi yiri mpi.
E nwere ụfọdụ ụdị dị ka paini ma ọ bụ larch nke jupụtara na mpaghara gụnyere Siberia, Alaska na Scandinavia. Ndi umu a nwere ike iguzobe oke ohia nke otutu puku puku hekta. Akwụkwọ osisi ndị a dị na elu niile na akụkụ kachasị elu nke kọntinent dịka Asia, America na Europe.
Ndị ọkà mmụta sayensị abịawo na nkwubi okwu na oke ọhịa na-acha akwụkwọ ndụ bụ ụdị mmegharị maka ọnọdụ gburugburu ebe obibi dị iche iche. Ma obu na nkpuru ahihia na-agbali itinye aka n’ebe ahu o gha agha. Nke a pụtara na enwere ụfọdụ ụdị osisi nwere ahịhịa na-ahịhịa na ahịhịa ndị ọzọ. Ndụ bara uru nke akwukwo ọ bụla ga-adabere na peculiarities nke ihu igwe na ala ebe osisi ahụ dị. Typedị osisi ọ bụla nwere mkpa mmegharị dị iche iche.
Characteristicfọdụ njirimara njirimara na-enweghị atụ maka mmegharị nke ụdị bụ nha, nhazi na ọdịdị. Njirimara ndị a pụtara na ụdị ụfọdụ dị ka holm oak nwere ike igbochi akpịrị ịkpọ nkụ n'oge oge okpomọkụ mgbe mmiri ozuzo dị ala na okpomọkụ dị elu. Ke adianade do, àgwà ndị a na-enyere ha aka inwe ike ichebe epupụta, okpomọkụ na-ada n'ihi mbata nke oyi.
Oke ohia na imeghari
Imirikiti oke ọhịa osisi anyị na-ahọta ka anyị na-ahụ na mpaghara ahịhịa mmiri na mpaghara ifuru nke Mediterenian. Buru n'uche na osisi nwere usoro mmegharị iji lanarị ụkọ mmiri ozuzo mgbe niile. N’oké ọhịa ahụ anyị na-ahụ osisi nwere mkpọrọgwụ miri emi yana nnukwu mgbatị na-enye ohere iji nweta mmiri mmiri n’ụzọ gbatịrị agbatị. Ọzọkwa, epupụta nwere udidi na-eguzogide ọgwụ ma sie ike na ọnọdụ dị iche iche dị iche iche na enweghị mmiri ozuzo.
Ihe nlele nke kachasị dị mkpa na oke ọhịa na-acha ahịhịa na nnukwu oak holm. Osisi ndị a nwere ogo dị elu mana ha nwere ahịhịa ndị gbara ọkpụrụkpụ ma sie ike. N'elu osisi ndị a dị okirikiri ma na-enye aka inye ezigbo ụlọ anwụ.
Oku achicha nwere agba oji di omimi ma nwekwaa otutu ohia sitere na ya nke na-adighi eri. Akwụkwọ ya dị n'etiti 4 na 7 centimeters na ọ nwere ike ịdị ogologo ndụ n'etiti 150 na 250 afọ. N'aka nke ozo, oak holm nwere akpati na-agbanwe agbanwe nke nwere ezi nguzogide. Ọ nwere àgwà dị iche iche na-eme ka ọ dị mma maka ịkwa arịa. Ya osisi bụ nnọọ na-achọ.
Ọzọ dị iche iche nke evergreen osisi bụ paini. A na-ahụta ya dị ka otu n'ime ụdị ndụ dị ndụ. Ọ nwere nnukwu ike ịmepụta ala na-eme nri ebe ọ nwere oke ọdịda nke ahihia. Ike ya iguzogide mmiri, akọrọ, oyi na ọnọdụ ọkụ na-eme ka ọ bụrụ ọkacha mmasị maka ogige ntụrụndụ na oghere. Ọ dịkwa mma maka nlọghachị ka ọ na-ewepụta nnukwu ala na-eme nri.
N'ikpeazụ, acacia mimosa ahụ pụtara ìhè n'etiti otu evergreen. O nwere ike iru mita iri n'ịdị elu ma mekwa ka ike gwụ ya ike ma ọ bụrụ na emechara pruning zuru ezu.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere ọhịa evergreen.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Osisi Evergreen